TORITENY Alahady 11 Septambra 2016 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 11 Septambra 2016
Isaia 12, 1-6 / Jaona 4, 39-45 / Asan’ny Apostoly 19, 17-22
Fanontaniana sahady no apetraky ny Tompo aminao dieny ety am-boalohany : manao ahoana ny fahazotoanao mizara ny Tenin’Andriamanitra eo anivon’ny tokantrano, ny toeram-piasana, ary ny fiaraha-monina ? Izay manasongadiina indrindra fa be ny asan’Andriamanitra miandry ny Kristiana saingy ny mpiasa no vitsy.
Raha ny bokin’ny Asan’ny Apostoly 19, 17 – 22 no asian-teny dia hita fa ataon’ny olona ho fitadiavam-boninahitra sy laza ary koa mety ho fitadiavam-bola aza ny fitoriana ny Filazantsara.
Toy izany indrindra no hita eto ny amin’ny zanak’i Skeva izay namoaka demonia nefa tsy mba nanana an’I Jesosy tao anatiny akory .
Mamporisika anao izay efa manana an’I Jesoa ao anatiny, ny Tompo, mba hanambara ny asany fa raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso izay raha adika mazava dia rehefa tsy sahy mijoro manambara an’I Jesoa Kristy ny Kristiana dia ireo izay misandoka anarana no hanatanteraka izany, mba ho filàn-dera sy fahazoam-bola.
Aoka tsy ho variana mikatona ao anty rindrin’efatry ny Fiangonana na ny tokantrano fa sahia mijoro hitondra fahazavana eo amin’ireo izay mbola ao anatin’ny fahamaizina.
Tanjon’ny asa fanompoana rehetra atao amin’ny anaran’I Jesoa ny hanambara ny fitiavan’I Jesoa Kristy ny olona rehetra, ka nanolorany ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Koa na asa fandroahana demonia, na toriteny, na tafika Masina, na hira fiderana, na adidy, dia tanterahina ireny mba hanambarana ny asan’ny Tompo.
Alao hery ary ry Kristiana havako izay efa nanao asa maro tamin’ny anaran’I Jesoa, mba ho tena sahy manambara tokoa ary tsy ho menatra ny vavolombelon’I Jesoa isika .
RABENINTANY, Mpitoriteny SEFALA
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 13 septembre 2016